Ndụmọdụ iji gaa Shanghai na ụbọchị ole na ole | Akụkọ Njem
Ndụmọdụ iji gaa Shanghai na ụbọchị ole na ole
Njem Asia | | Shanghai, Asia njem
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji gaa Shanghai, ka anyị kwuo ụbọchị ole na ole ma ọ bụ atọ, aga m enye gị ụfọdụ ndụmọdụ ga - enyere gị aka ịmatakwu obodo China a dị egwu, nke ochie na nke oge a na - agwakọta:
Egbula oge iji Transrapid si n'ọdụ ụgbọ elu gaa obodo ahụ, ọ bara uru inwe mmetụta ọsọ na 430 kilomita kwa elekere.
Iji banye na Shanghai, a na-atụ aro tagzi. Ha nwere mita ma ha adịghị oke ọnụ, njem site na Shanghai ma ọ bụ Beijing nwere ike ị nweta ihe dị ka euro 2 ma ọ bụ 3.
Enwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, dị ọgbara ọhụrụ ma dịkwa ọfụma. Ọ bụrụ na ị gaa na Shanghai kwa oge, ị gaghị amata akụkụ ụfọdụ nke obodo ahụ.
A na-atụ aro ka ị gwa ụlọ nkwari akụ ka ọ dee gị na Chinese ebe ịchọrọ ịga, na ha na-enye gị maapụ iji gosi ndị ọkwọ ụgbọ ala, ha anaghị asụ Bekee ma ọ bụ naanị ịghọta mkpụrụ okwu ndị China.
Mgbe ị gara ileta Shanghai ochie, ị ga-ahụ ezigbo China, nke ochie. Ọ dị ịtụnanya maka ụlọ ya, ụlọ nri, obere ebe ịzụ ahịa, ahịa, okporo ụzọ ndị wara wara, obere ụlọ ahịa ochie. N'ime obere ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ndị dị n'ahịa a, ị ga-ahụ ihe niile ị ga-azụ, uwe, silk, ọnụ ọgụgụ, egbe, akpa. Ma ọ dị ka na Naijing Street, na haggling bụ ihe siri ike, ebe a ma ọ bụrụ na ị chọrọ haggle, ị ga-enwe oge dị ukwuu.
Iji na-atụgharị uche na obodo si n'elu, gaa na telivishọn elu Perla de Oriente bụ nnukwu. Ọ nwere ọdịdị galactic, nke nwere mita 470, nke ụkwụ atọ kwadoro, enwere nnukwu bọọlụ nke bụ echiche wee wee bọọlụ ise ọzọ, ndị pere mpe, na-arịgo, nke bụ ụlọ nkwari akụ dị iche iche. Go ga-akwụ ụgwọ iji lee ihe anya, mana o ruru ihe na-erughị 1 euro.
Younwekwara ike ịnụ ụtọ elu site na ụlọ Jin Mao, nke ezubere maka ọfịs ruo n'ala nke 54 ebe ala maka ụlọ nkwari akụ Hyatt na-amalite, ebe ị nwere ike ịrị elu n'efu. Ọ bụrụ n'ịchọrọ gbagoro n'echiche ahụ, ị ​​nwere ike ime ya naanị n'okpuru 1 euro.
Echefula igwefoto ma nwee ọ !ụ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Shanghai » Ndụmọdụ iji gaa Shanghai na ụbọchị ole na ole
Ezigbo transrapid, mana kpachara anya maka ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị na-abịakwute gị n'elu ikpo okwu, aghụghọ na izu ohi; Si na ụkwụ nke ọdụ ụgbọ ala ahụ pụọ, ị ga-ahụ ọkwa tagzi nke ndị uwe ojii na-achịkwa.
Zaghachi José Fandos
Ọfịs ndị njem na London